साहित्य/विचार Archives - Page6of6- www.kchhakhabar.com
नेपाली लेखिका ले लेखिन यौन कथा “खेताला लोग्ने” पढ्नु होस्
अस्वाभाविक , उच्छृंखल , नेपाली समाजमा अपाच्य र कल्पना भन्दा अलि बाहिरकै एक प्रकारले लेखिकाको यौन कुण्ठा भन्दा फरक नपर्ला यो कथालाई ।प्रस्तुत त देबकी के सी को कथा “खेताला लोग्ने ” पूर्ण कथा धेरै वर्षपछि आज आज अचानक भेट हुँदा कृष्ण र कुमार असाध्यै खुसी भए। अप्रत्यासित भेटले उनीहरुको मानसपटलमा बाल्यकाल चल्मलाउन थाले। बाल्यकालको साथी कृष्ण अमेरिकाबाट पिएचडी सकेर विश्वविद्यालयमा प्राध्यापक भएको ...
दरबार हत्याकाण्ड कसले गरायो- यी ६ कुराबाट पत्ता लगाउन सकिन्छ
काठमाडौं । ‘देवयानीको अवस्था अहिले अस्वस्थ छ । अत्यन्त कमजोर अवस्था छ । ऊ विश्राममा छ । म प्रयासचाहिँ गर्छु ।’ ‘यहाँलाई थाहै छ, तीन दिनको समय आज सकिँदैछ । हामीले म्याद थपको रिक्वेस्ट गर्‍यौँ भने पनि धेरै समय उपलब्ध हुनेजस्तो लाग्दैन । यो स्थितिलाई अनुमान गरेर छिटोभन्दा छिटो जति सकिन्छ, देवयानीलाई यहाँ उपस्थित गराइदिन सक्नुभयो भने…।’ राजदरबार हत्याकाण्डको छानबिनका लागि गठित तत्कालीन प्रधानन्याया...
ममतामयी आमा नमस्कार ! लामो समयको अन्तराल पछि पत्र कोर्दैछु । आरामै छु र आरामको कामना गर्दछु । तपाईंसँग भेटघाट नभएको पनि झण्डै ४ वर्ष बितेछ । फोनमा त बेला बेलामा समाचार आदानप्रदान हुन्थ्यो नै तर उही त हो महँगो शुल्क अनि टाढा भएकाले मात्र हालखबर र सञ्चो विसञ्चोमा सीमित हुन्थ्यो । मनका कुरा खुलेर गरुँभन्दा पनि गर्नै नपाईने । घरमा कम्प्युटर भए पनि इन्टरनेट चलाउने समयमा बत्ती नै नहुने । आमा ! गत सात...
राजधानीको सुविधा सम्पन्न परिवारमा जन्मे हुर्किएकी मैले कुनै कुराको अभाव व्यहोर्नु परेको त थिएन । माध्यामिक तहको पढाईसम्ममा म अव्वलनै विद्यार्थी थिएँ । ट्युसन, स्कूलको पढाईले अन्य कुरामा ध्यान जाने फुर्सदै हुँदैन थियो । माध्यामिक स्कूलसम्म मेरा कम मात्र मन मिल्ने साथी थिए । घर नजिकै विद्यालय भएकाले पढाईको चापका कारण अन्त मन डुलाउने, साथीसंगी बनाउने फुर्सद पनि भएन । मैले प्रवेशिका परीक्षा विशिष्ट श...
जब पर्खालले नछोपिने दृश्यहरु बिचारका धर्काहरुले छोपिदिन्छन तब मस्तिष्कहरु भ्रमित हुन्छन् ।’ त्यस्तै नेपालीको धर्म, कर्म र संस्कारलाई पाखा लगाएर आमा समानकी सासु आमालाई किन ढोग्ने भनेर आफुलाई अपमानित सोच्ने कलियुगका बुहारीहरु कुर्लन्छन तब सोच्नुस त्यहि नारी श्रीमानको बिस्तारामा किन जाने गर्छन ? केहि दिन अघि एक महिलाको आर्टिकल अनलाइनमा आयो मैले सासुको खुट्टा किन ढोग्नु भनेर जसले मलाई बडो अचम्मित तुल्...
यी आँखाले किन अचेल तिमीलाई नै खोज्छन
यी आँखाले किन अचेल तिमीलाई नै खोज्छन हजारौको भिडमा पनि तिमीलाई नै रोज्छन कहाँ देखू कहाँ भेटु किन फेरि यो उदासी फुली दिन्छ प्रीत मन्मा राखी दिन्छु माला गासी मन्द मुस्कान बन्द ओठ बोल्छौ जब तिमी हासी स्वीकार छन् सबै मलाइ तिमीले गर्ने बदमासी यी ओठले अचेल किन तिम्रै बोल बोल्छन ना छेक्न सक्छु तिम्रो याद मन्ले ढोका खोल्छन पाप पुण्य थाहा छैन देव भन्दा माथि देख्छु मेरो मन बुझ्न सक्ने केवल ...
सद्भावना दूत बालविवाह एवम् दाइजो उन्मुलन राष्ट्रिय अभियान नेपाल माघ १९/ विवाहको समयमा बेहुली तर्फबाट बेहुला वा बेहुलाका परिवारलाई दिने नगद तथा जिन्सी सरसामानलाई नै दाइजो भनिन्छ । यसलाई तराइ तथा मधेसतिर दहेज पनि भनिन्छ । सामान्यतः दैनिक जीवनमा चाहिने घरेलु सामानहरु जस्तै फर्निचर, लत्ताकपडाका सामाग्रीहरु दाइजो दिइन्छ । सुनचाँदी हिरामोतीका महंगा गरगहनाहरु पनि दाइजोमा पर्छन् । समयक्रमसँगै आधुनिक स...